Quick Answer: What Percentage Of Zimbabwe Is White? - mcnelislandscaping.com
What is the population of Zimbabwe 2020?
14,862,924 peopleThe current population of Zimbabwe is 14,901,545 as of Sunday, September 6, 2020, based on Worldometer elaboration of the latest United Nations data.
Zimbabwe 2020 population is estimated at 14,862,924 people at mid year according to UN data.
Zimbabwe population is equivalent to 0.19% of the total world population..
30,252 ZimbabweThe 2011 Census noted there are 30,252 Zimbabwe-born people living in Australia. The vast majority are skilled and educated, with 74.5% of the Zimbabwe-born aged 15 years and over possessing higher non-school qualifications, compared to 55.9% of the Australian population.
Spread and distributionEstimated Zimbabwean populationLocation(s)40,000London20,000 eachLeeds, Luton10,000 eachBirmingham, Manchester, Milton Keynes, Sheffield, Slough5,000 eachCoventry, Glasgow, Leicester, Wolverhampton3 more rows
Zimbabwe – Ethnic groups Africans make up 98% of the total population in Zimbabwe and are mainly related to the two major Bantu-speaking groups, the Shona (about 82% of the population) and the Ndebele (about 14%).
14.44 million (2018)Zimbabwe/Population